Ndezvipi zvigadzirwa zvemari zvaunogona kudyara mumari? | Ehupfumi Zvemari
Chikamu chakanaka chekudyara chinoitwa mumaeuro nekuti ndiyo mari zhinji pakati pevapambi veSpanish. Nekudaro, hazvigone chete kushanda mune iyi mari asiwo mune mamwe akakosha epasi rese. Semuenzaniso, dhora rekuUS, pondo yeBritish, iyo Swiss franc kana kunyange iyo yekuJapan yen yen. Chinhu chete chinoshayikwa sarudzo yako yekuisa mari mune yemari zvinhu izvo mutorwa kune euro. Asi nezve zvese zvigadzirwa zvemari zvinobvuma mukana uyu, izvo kune rimwe divi huwandu hwazvo. Kubva pakutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya kusvika kumabhangi ekupedzisira.
Kuisa mari mune dzimwe nyika dzepasi rose kunokupa mukana wekuti mari dzako dzisimuke maererano negoho rakagadzirwa. Asi chenjera zvikuru neiyi yakasarudzika nzira nekuti ivo vanogona zvakare kurasikirwa nemari mune yega yega mashandiro. Nekuti haugone kukanganwa kuti mari yekunze inzvimbo yemari inotengeswa mazuva ese mumisika yemari. Semhedzisiro yechiito ichi, kukosha kwayo hakusi kwakafanana nguva dzose, asi zvinopesana, mwero wayo wekutsinhana unogara uchichinja. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kuita bhizinesi nekufamba uku kana kuti zvimwe kukusiira iwe chikamu chakanaka cheguta rako.
Chimwe chinhu chinofanirwa kutarisirwa kubva zvino zvichienda mberi kuona kuti ndezvipi zvigadzirwa zvekuchengetedza uye zvekudyara zvinotsigira zano iri uye pasi pemamiriro api aunogona kuita mashandiro. Nechinangwa chekuti kubva ikozvino zvichienda mberi iwe unenge wave mumamiriro ari nani e kunatsiridza yako yepazasi mutsara pane zvako zvese zviwanikwa. Kunyangwe pasina kupokana kuti kana iwe ukaisa ino sisitimu unenge uchitora njodzi yakawanda mukushanda. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye izvo zvine zvakawanda zvekuita nehunhu hweiyo yakasarudzwa yemari chigadzirwa.
1 Zvakanakira kuisa mari mune dzimwe mari
2 Madhipatimendi emari dzenyika dzese
3 Zvakawanda zvakaoma mari yekudyara
4 Mamogeji akanyorwa mune dzimwe mari
5 Mashandiro ekuchinjana kwenyika
Zvakanakira kuisa mari mune dzimwe mari
Imwe yemipiro yakakosha yekudyara mune dzimwe nyika mari dzinobva pakuti kudzoka kwako kunogona kuwedzera uye dzimwe nguva zvine simba rakakura. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei vatengesi vazhinji vachisarudza iyo kushanda mumadhora, mapaundi kana maSwitzerland mafranc. Kwete zvisina maturo, vanoedza kuisa panjodzi mari yavo kuburikidza neiyi nzira isingaenderane yevamwe vashandisi vetsika. Kubva pane ino maonero mazhinji, mazhinji mabhizimusi mikana apo iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unokunda kana kurasikirwa. Nekuti usakanganwa kuti tiri kutaura nezvechinhu chemari.
Imwe yemabhenefiti ayo ndeyekuti inogona kusarudzwa kubva kunhamba hombe yemari, kwete ongororo yemari chete. Ichi chinhu chinopa yakafara kuchinjika kune mashandiro uye izvo zvinobvumidza kutora mukana wenguva dzakanaka mukushanduka kweimwe mari. Kunyangwe iwe uchifanira kunyatso chenjera nemisi yakatarwa, kunyanya nezvigadzirwa zvine kupera kwenguva refu kwazvo nekuti mhedzisiro yavo inowanzo kuve yakaipa pamusoro pemakore. Muenzaniso wakajeka unonongedzera kune ino maitiro ndiyo inomiririrwa nezvikwereti zvemari zvakatengwa mune dzimwe mari. Kusvika pakuti mune imwe nzira inoonekwa sechigadzirwa chine chepfu.
Madhipatimendi emari dzenyika dzese
Ehe, nguva yekuisa ndiyo nzira iri nyore yekudyara muzvigadzirwa zvekuchengetedza. Aya mafambiro anoitwa muchiedza cheasina kusimba purofiti margins inopihwa neaya mabhengi zvigadzirwa panguva ino. Kwete zvisina maturo, zvazviri nezvazvo tambira mashoma egumi muzana muzana maererano nemubhadharo wavo. Sezvo mafambiro acho aine chisimba. Ndokunge, nekusagadzikana kukuru mumutengo wemari dzinodikanwa. Iko kunonyanya kunetsekana kunobva pachokwadi chekuti maitiro aya anowedzeredzwa mukati menguva yese yechigadzirwa chakasarudzika nemudiki nepakati investor.
Nezve ma term deposits, hazvidiwe kwazvo kushandisa zano iri sezvo paine zvishoma kwazvo zvekuwana nekuda kwekudzoka kushoma uko kunogadzirwa kubva mune ino chaiyo tsika yekuponesa. Kunyangwe kana zano racho rikakundikana, hapana mubvunzo kuti purofiti pakupedzisira inogona usadaro nil. Nekusagadzikana kwekuti mari ichafanirwa kunge isingakwanisike kwenguva yakawandisa. Hazvishamise kuti iyi ndiyo imwe njodzi inofanirwa kutorwa pamwe nekubvumirana kwetemu dhipoziti. Iko kwaunenge uine zvakawanda zvekurasikirwa pane kuwana. Ndokunge, shure kwezvose, sarudzo yako ndeyei.
Zvakawanda zvakaoma mari yekudyara
Chimwe chezvigadzirwa zvemari zvinobvumidza kondirakiti yemamwe mari kunze kweiyo euro zviri pachena mari yekudyara. Ose ari maviri ayo akasarudzika uye akasarudzika emari vhezheni. Asi uine hunhu chaihwo uye ndiko ndiko kushanda uku inotakura komisheni izvo zvinogona kutadzisa pasi mutsara wekudyara. Nekuti zvirizvo, kuhaya kwako kunounza mubhadharo weshanduko yemari. Chinhu chinouya kuzopesana kana pakupedzisira pundutso yaunoda isingawanikwe nevashambadzi vadiki nepakati. Kusvika padanho rekuti haigone kuve basa rinobatsira kune chikamu chakanaka chevabati veichi chigadzirwa chemari.
Kune rimwe divi, haugone kukanganwa kuti mari yekudyara yakanyorerwa mune dzimwe mari dzisiri iyo euro ine dzimwe njodzi dzakawanda kupfuura dzechinyakare. Chaizvoizvo nekuda kwehunhu hwatino nongedzera kwauri uye izvo zvinokonzerwa nekuchinja-chinja kwemari pachayo mumisika yemari. Kubva pane ino maonero ekudyara, hapana mubvunzo kuti iwe unofanirwa kuongorora iri rakasarudzika zano zvakanyanya zvakanyanya mukugadzirisa kwako kusevha. Kunze kwekuti homwe iri kubvunzwa iri chaiyo chaizvo kutora mukana wemamiriro ezvinhu emisika.
Mamogeji akanyorwa mune dzimwe mari
Kana isu hatikwanise kukanganwa nezvezvikwereti zvegeji kune iyo njodzi huru yekushanda uku yakakosha uye panguva imwechete ine njodzi. Nekuti zvirokwazvo, njodzi dzinofananidzwa nezvimwe zvigadzirwa zvikuru. Chero kukanganisa mukuverenga kunogona kudhura zviuru nezviuru zveeuros uye hazvishamise kuti vashandisi vazhinji vabatwa murudzi urwu rwekushanda. Nemhedzisiro mhedzisiro yekuti ivo vachange vabhadhara imwe mari zvichienzaniswa nekunge ivo vakaita chibvumirano chekutenga chikwereti muma euro. Mune ino pfungwa, iwe unofanirwa kuve uine chokwadi chekuti shanduko yemari yakasarudzwa ichave iri chaiyo. Nekuti kana zvisiri, mhedzisiro yacho inokuvadza zvakanyanya kune zvaunofarira.
Iri kirasi rezvikwereti zvemogeji rakasainwa mukutenda kuti kuchengetedza mari kuchakosha kwazvo. Asi pasina kufunga izvozvo shanduko yemari kugamuchirwa kwaisazotarisirwa kubva pakutanga. Kunyangwe iine hukuru hwakanyanya kusimba kupfuura zvaitarisirwa uye izvo zvinomiririra mari yakawanda mukuita. Nechikonzero ichi, hachisi chigadzirwa chakakurudzirwa chaizvo kune vashandisi nekuti vanogona kunge vaine lags mumaakaundi avo ega mune dzimwe nguva haigone kutsigirwa. Kubva pane ino mamiriro, inoonekwa seyakaipisisa chigadzirwa uye nekudaro haifanire kupihwa chibvumirano neimwe nzira.
Mashandiro ekuchinjana kwenyika
Chekupedzisira, zvinofanirwa kuratidza mashandiro ekutenga nekutengesa mumisika yepasi rose. Dambudziko rayo hombe nderekuti mashandiro ayo anosanganisira makomisheni anorema kupfuura mumisika yenyika. Kusvika padanho ravanogona zvakapetwa kana zvakapetwa mitengo inopihwa nemasangano emari. Zvese zvinhu zvichange zvichishandiswa zvakanaka kana pakupedzisira mari inowanikwa ikawedzera kunakidza. Nekuti kana iyi isiri iyo mamiriro, iyo mari ichave yakakwira. Pasina kuverenga pamhedzisiro mhedzisiro yekushanda kunze kwenyika. Nekudaro, iwo mukana wekutora mukana wesarudzo dzekufona dzinogadzirwa mumisika yemasheya kunze kwenyika.
Aya mashandiro haatore kuchinjana kwakananga kwemari, asi iko kushanda kunofungidzirwa nemisika yemari. Iri mu akasiyana makomisheni uye manejimendi mari uye kugadzirisa paunozoona kuti iri basa rakawedzera zvakanyanya. Kunyangwe ivo vari kusvika pamatanho ezvekare zvigadzirwa zvemari zvakafumurwa. Kunyangwe hazvo pasina kupokana kuti kana iwe ukaisa ino sisitimu unenge uchitora njodzi yakawanda mukuita. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye izvo zvine zvakawanda zvekuita nehunhu hweiyo yakasarudzwa yemari chigadzirwa.
Nekuti iwe unofanirwa kuziva kuti kudyara mune dzimwe mari hazvireve iwo mubhadharo wakafanana neuyo wakaitwa mune yakajairika mari yeEurope. Kunyangwe zvodii inogona kuve inofungidzirwa, asi uchifunga kuti kusagadzikana kwayo kuri pachena kwazvo. Dzimwe nguva pasi pematanho mausina kana iwe unogona kutora mashandiro. Kunyangwe iine hukuru hwakanyanya kusimba kupfuura zvaitarisirwa uye izvo zvinomiririra mari yakawanda mukuita. Iyi inguva yekuti iwe ufunge kana zvichinyatsoita kuti iwe uchinje mari kuti uite mafambiro aya munzvimbo inogara yakaoma yekudyara. Zvakakosha chaizvo here? Pakupedzisira sarudzo yako inokunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Ndezvipi zvigadzirwa zvemari zvaunogona kudyara mumari?